musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Chile Kupwanya Nhau » Chile iri kuvhurazve kune vakazara vaccinisita vashanyi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Chile Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuvharirwa kwevanonyatsodzidziswa vafambi vekunze kuchasimudzwa kana mhedzisiro yePCR bvunzo yavo yaitwa pavanosvika kuChile haina kunaka.
Kupinda muChile kunogona kuburikidza nendege nhatu dzeIquique, Antofagasta, uye Arturo Merino Benítez.
Usati wapinda munyika, majekiseni akagamuchirwa nehurumende yemunhu anofanirwa kusimbiswa kuitira kuti pasipoti yekufambisa igone kupihwa kubva kuChile.
Vanhu vasina kubayiwa (uye nekudaro havagone kunyorera yekufambisa) havasati vatenderwa kupinda munyika.
Vakuru vehurumende yeChile vakazivisa kuti kutanga munaNovember 1, 2021, iyo yekuvharirwa yevakazara vachengeti vekunze vafambi vachasimudzwa kana mhedzisiro yePCR bvunzo yavo yaitwa pavanosvika mu Chile hazvina kunaka.
Vafambi vanofanirwa kubayirwa zvizere, uye majekiseni anofanirwa kuzivikanwa muChile.
Izvi zvinotevera zvinodiwa zvekupinda zvinoenderana neazvino, ruzivo rwepamutemo:
Kupinda mu Chile inogona kuburikidza nendege nhatu dzeIquique, Antofagasta, uye Arturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Usati wapinda munyika, majekiseni akagamuchirwa nehurumende yemunhu anofanirwa kusimbiswa kuitira kuti pasipoti yekufambisa (pase de movilidad) ikwanise kupihwa kubva Chile. Iko kunyorera kwekucherechedzwa kwemajekiseni kunowanikwa online.
Pedzisa fomu yemagetsi "Afidhavhiti yeMufambi" anosvika maawa makumi mana nemasere usati wakwira, mauri unofanirwa kupa ruzivo rwekuonana, hutano, uye nhoroondo yenzvimbo. Iyi fomu inosanganisira QR kodhi senzira yekuongorora. Inogona kupedzwa pamhepo (yeChirungu vhezheni inowanikwa).
Vashanyi vanopinda muChile vanofanirwa kuve neinishuwarenzi yehutano yekufambisa inovhara huwandu hwemadhora zviuru makumi matatu.
Uchapupu hweyakaipa PCR bvunzo yakatorwa maawa makumi manomwe nemaviri bhodhi isati ichiri kudiwa. Kuedzwa kwePCR kunoitwa zvakare kunhandare yekuenda kuChile.
Kuedzwa kwePCR kunoitwa kunhandare yekuenda kuChile. Vanhu vanopinda munyika vanofanirwa kufamba nekutakura vega uye vakananga kunzvimbo yakatarwa yekugara kubva panguva yekupinda uye kumirira ipapo kune mhedzisiro yePCR bvunzo (nguva inosvika maawa makumi maviri nemana). Kana iyo bvunzo isiriyo, iyo-yemazuva mashanu yekuisa wega haishande.